कि'न आउँ'छ अ'मिलो डका'र ? यस्तो छ कार'ण - HPsanchar.com
खा’ना खाएपछि मानिसहरुलाई अ’क्सर डका’र आउने गर्दछ । ड’कार लिनाले पे’टमा जम्मा भएको हावा बाहिर निस्कने गर्दछ। यस्तो डका’र सामान्य हुदाँसम्म हामीलाई खासै स’मस्या हुँदैन । तर जब पेटबाट अमिलो डका’र निस्किएमा भने धेरैलाई तनाव हुने गर्छ। आखिर किन आउँछ अमिलो डकार ? चिकित्सकहरुका अनुसार ग्याष्ट्रिकको समस्या भएमा पनि अमिलो डकार निस्कने गर्दछ। जुन प्राय खाना खानु अघि वा खाना खाएपछि निस्कने गर्दछ । अपचका कारण पनि धेरैलाई अमिलो डकार आउने गर्दछ । विशेषगरी चिल्लो, पिरो वा अमिलो खानेकुरा, चिसो पेय पदार्थको अधिक सेवन तथा मदिराको सेवनका कारण पनि यो स’मस्या हुने गर्छ। यो समस्या भएमा पेट फुल्ने, पे’ट दु’ख्ने, घाँटी तथा पेटमा जलन वा उल्टी हुने गर्दछ । यस्तो स’मस्या प्राय ग्या’ष्ट्रिकका कारणले हुने हुदाँ मानिसहरु अक्सर घरे’लु औषधीको प्रयोगद्धारा नै यसको उपचार गर्दछन् । साथै, भोक लागे अनुसार उचित मात्रामा खानाको सेवन गरे, चिल्लो पिरो तथा अमिलो खानेकुरा खानबाट जोगिएर तथा कैफिन तथा म’दिरापान नगरेर पनि यो समस्याबाट जोगिन सकिन्छ । साथै, सक्रिय जीवनशैली अपनाएर पनि यो समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।
अमिलो डका’र आउनुका लक्षण: अमिलो पानी वा डकार आउनु आफैमा अपच, ग्या’ष्ट्रिक वा पेटसित सम्बन्धि रो’गहरुको संकेत हो । यसको लक्षण सबैभन्दा पहिले शरीरको माथिल्लो पाचन तन्त्रमा देखिने गर्दछ ।
जुन यसप्रकार छ: पेट दुख्ने । पेट गडगडाउने-कराउने । पेटको अल्सर । क’ब्जियत । वाकवाकी लाग्ने । छाती पोल्ने । अमिलो पानी आउने । सामान्यतया अमिलो पानी सिर्फ खानाकै कारण मात्र पनि आउँदैन । तनाव, अनियमित व्यायाम तथा अन्य पुराना रो’गका कारण पनि मुखबाट अमिलो पानी आउने गर्छ ।
कतिबेला देखाउने चिकित्सकलाई ? अमिलो पानीलाई जटिल समस्या नभएका कारण यस्तो समस्या हुँदैमा चिकित्सकका गईहाल्नु पर्दैन। यद्यपी, धेरै अमिलो पानी आएमा वा अमिलो डकार आएमा भने चिकित्सकसित परार्मश गर्न जरुरी छ ।
किन आउँछ अमिलो डकार ? अमिलो डकार विभिन्न कारणले आउने गर्छ । जसमध्यको एक खानालाई पनि मानिन्छ । विशेषगरी खाना पच्ने क्रममा शरीरको ग्यासको विकास हुदाँ पनि धेरैलाई अमिलो डकारको स’मस्या हुने गर्छ । त्यस्तै, प्रोटिनयुक्त आहार तथा म’दिराको सेवनका कारण पनि धेरैलाई अमिलो डकारको समस्या हुने गर्दछ । त्यस्तै, कतिपयलाई इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम, पेटको एसिड भोजन नलीमा आएमा तथा पाचन प्रक्रिया सम्बन्धि समस्या भएमा पनि अमिलो डकार आउने गर्दछ ।
धेरै खाना: आवश्यक्ता भन्दा बढी मात्रामा भोजन गर्नाले पनि धेरैलाई अमिलो डका’र आउने गर्दछ। मदिरा, कैफिन तथा चिसो पेय पदार्थ लगायतका कारण पनि अमिलो डकार आउने गर्दछ । त्यसबाहेक, नाकको सट्टा मुखबाट सास लिने तथा खाना खाने समयमा धेरै बोल्ने मानिसमा पनि अमिलो डकार वा अमिलो पानी आउने समस्या हुने गर्दछ ।
मोटोपना: विभिन्न समस्याका मोटोपना भएका मानिसमा यो स’मस्या आउने गर्दछ । विशेषगरी, मोटो मानिसहरुमा बाटुलो शरीरका कारण पेटमा अधिक वल पर्न गर्छ । जसका कारण पेटको एसिड अन्न नलीमा पुग्ने गर्छ। त्यसबोहक, अनियमित व्यायाम तथा गलत खानपानका कारण पनि यो समस्या हुने गर्छ ।
गर्भावस्था: गर्भावस्थाका दौरान धेरैलाई अमिलो पानी वा अमिलो डकार आउने समस्या हुने गर्छ । विशेषगरी, पेटमा रहेको गर्भको आकार बढ्दै गएम पेटमा वल पर्ने गर्छ । र, यस दौरान बन्ने वाला हर्मोन अन्ननलीको मुन्तिरको भागमा पुगेर यसले असर देखाउने गर्दछ । त्यसबाहेक गर्भावस्थामा हुने र’क्तअल्पत्राका कारण सास फुल्ने तथा अत्याधिक थकान महसुस हुने गर्दछ। जसका कारण गर्भवती महिलाहरुले मुखबाट सास लिने गर्दछन् । र, सोही क्रममा हावा पेटमा पसेर अमिलो डकारको समस्या निम्त्याउने गर्दछ । त्यसबाहेक, अन्य कारणहरुले गर्दा पनि अमिलो डकार आउने गर्छ । जुन यस प्रकार छः -केही औषधी, -तनाव, -भोकै बस्ने, -अत्याधिक चिन्ता, -अनियमित व्यायाम, -आवश्यकता भन्दा बढी मात्रामा खाना, -छिटो छिटो खाने बानी, -गलत समयको भोजन, -खाना खाए लगत्तै सुत्ने बानी, -चिल्लो, पिरो खानेकुराको सेवन, -फुड प्वाइजनिङ्ग, -मदिराको सेवन
कसरी बच्ने ? -धुमपान नगर्ने, -छिटो छिटो नखाने, -सुत्नु केही घण्टा अगाडाी खानाको सेवन, -डकार आउनु पूर्व पेटमा हावा निस्कनु, -पेय पदार्थको सेवन गर्दा पाइपको प्रयोग गर्नु, -चुइगमको प्रयोग कम गर्ने, -तारेको वा भुटेको खानेकुरा नखाने, -प्रशस्त मात्रामा पानीको सेवन गर्ने, -सक्रिय जीवनशैली अपनाउने, -सुत्नु ३/४ घण्टा अघिबाट केही नखाने । अमिलो डकार आएमा हुन सक्ने समस्या ? अमिलो डकार आउने समस्या समयमै ठीक नभएमा यी समस्या उत्पन्न हुन सक्दछ । -भोजन नलीमा घाउ भएन नयाँ डिस्यू पलाउने, -अन्न नलीमा घाउ वा जलन पैदा हुने, -अन्ननलीमा रक्तश्राव हुने, -घाँटी तथा आवाजमा समस्या आउने, -दाँत विग्रने , झर्ने, -सास लिनमा समस्या ।
दू’ध पिएपछि नगर्नुहोस् यी ग’ल्ती, नत्र स्वा’स्थ्यमा पर्छ ग’म्भिर अस’र